Manana Mponina Iray Tapitrisa Ve Ny Renivohitr’ i Kazakhstan ? Tsia Kosa Angamba · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Jolay 2016 5:27 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, Nederlands, Français, English
Astana. Antapitrisa mahery? Sary:Wikipedia .
Zava-dehibe amin'ilay mpanao didy jadona 75 taona Nursultan Nazarbayev ao Kazakhstan ao amin'ny Firaisana-Sovietika teo aloha ny tarehimarika sy ireo vakoka,
Andeha horaisina ny famerenana ny fifidianana ho filoham-pirenena tsy azo hifaninanana aminy tamin'ny volana Martsa tamin'ny herintaona izay nilazany fa fandresena lehibe nahazoany vato 97.7% tamin'ny valim-pifidianana sy nahitana taham-pahavitrihana 95.1%.
Raha ilay fifidianana izay novinavinain'ny sasany tamin'izany fotoana izany ho mety ho farany andraisany anjara no tsara indrindra hatramin'izay — kanefa tsy misy afaka milaza izany amim-pahatokisana.
Nilalao tarehimarika indray i Nazarbayev tamin'ity herinandro ity, ary sahy nilaza fa nahazo olona antapitrisany ny renivohitry ny repoblika Astana – tanàna izay novainy avy amin'ny satan'ny renivohim-paritany ho lasa foibe ara-barotra tena maoderina niaraka tamin'ny fanampian'ny vola azo tamin'ny solitany.
Nilaza ilay mpanjakazaka ela nihetezana roa andro talohan'ny Fetin'i Astana sady faha-25 taonan'ny fahaleovan-tenan'i Kazakhstan tamin'ny 4 Jolay hoe:
Amin-kafaliana lehibe no hilazako fa teraka androany ny mponina faha-iray tapitrisa eto Astana . Teraka tao amin'ny fianakavian'ny Mukhamedyarov ny zazakely . Mpikarakara tokantrano andro [Ny reniny] ary elektrisianina [ny Rainy] . Tanàndehibe manana mponina iray tapitrisa i Astana ankehitriny. Arahabaina!
Azo hiadin-kevitra ny tenin'i Nazarbayev na dia mahafinaritra hatrany aza ny mihaino sombiny kely amin'ny vaovao tsara ao anatin'ny krizy ara-toekarena tsy mitsaha-mitombo, .
Manana mponina 862.750 Astana tamin'ny fiandohan'ny taona araka ny sampandraharaha misahana ny antontanisa nasionaly. Niakatra ho 876,000 izany tamin'ny volana May. Manana fahazarana mametraka ny isan'ny vahoaka ho 800 000-900 000 ny mponina ao an-tanàna.
Nahazo fanamarihana mampihomehy avy hatrany avy amin'ny mpisera Twitter malaza Rinat Balgabaeyev ny fahasamihafana teo amin'ny lahatahiry ofisialy sy ny lahatahirin'ny olom-panjakana ambony tsy refesi-mandidy ao amin'ny firenena:
Niteraka ireo mponina ho an-tapitrisany taloha kelin'ny andro tsy fiasana i Astana! Mila miteraka an'ireo zaza rehetra manomboka amin'ny laharana 800,000 ka mifarana amin'ny laharana 999,999 fotsiny isika ankehitriny!
Ary ny iray hafa:
Mijery ny [Ben'ny tanàna vaovao] amin'ny fomba fijery vaovao aho. Nirongatra ny fiterahana hatramin'ny nandraisany ny toerany !
Ary ny fahatelo:
Na ny ankizy aza dia toa tafiditra ao amin'ny fandaharan'ny [fanjakana] ao an-drenivohitra “Fampandrosoana an'i Astana 2016-2020″.
Haingana ny fitombon'ny mponina tao Astana ilay renivohitra faharoa mangatsiaka indrindra eto amin'izao tontolo izao aorian'ny renivohitr'i Mongolia, kanefa nanamarika ny mpisera Twitter iray hafa fa ny sasany amin'ireo mponina mivezivezy ao sy any an-drenivohitra teo aloha Almaty izay be mponina kokoa, ary efa manana mponina maherin'ny 1,5 tapitrisa.
Na ahoana na ahoana, na dia ekena aza ny elanelan'ny fahadisoana eo amin'ny maodelin'ireo mpanao antotanisa, tsy dia inoana fa maherin'ny 100.000 ny olona nifindra nankao Astana tao anatin'ny roa volana farany, ary lavitr'ezaka ny ho mety fahaterahan'ny mponina an-tapitrisa aloha kelin'ny fankalazana ny fetim-pirenena .
Efa ho 25 taona mahery izao ankehitriny no nanana ny feon'ny fahefana tao Kazakhstana i Nazarbayev , kanefa efa manatona ny faha 76 taonany izy ka somary hafahafa rehefa miseho amin'ny vahoaka, miaraka amin'ny fanambarana mampihevitra politisianina iray efa tsy maharaka intsony [mg] ny fiainan'ny olom-pireneny.
Azo inoana fa tsy afaka hampisaraka intsony ny tena zava-misy amin'ny nofinofy ny filoha noho ny fitiavany tafahotra hametraka lova voarahon'ny fidinan'ny vidin-tsolika sy ny fikatsoana ara-toekarena ao Rosia.
Mandritra izany, tsy maintsy manao ny tsara indrindra ny sisa ao amin'ny firenena mba handroso hatrany.
Iray tapitrisa hoy ny filoha. Ary tsy manao fahadisoana na oviana na oviana ny filoham-pirenena